Madaxweyne Faroole oo arrimaha shidaalka iyo doorashooyinka si xasaasi ah uga hadlay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2013 9:49 b 0
Garoowe, October 16, 2013 – Madaxweynaha Puntland Dr. Faroole ayaa shirkii jaraa?id ee uu ku qabtay magaalada Garoowe kadib safarkiisii debeda uu kaga soo laabtay, waxaa uu kaga hadlay arrimo badan oo uu si xasaasi ah uga faalooday.
?Waxaa ka mid ah meelaha madaxweynuhu sida qotada dheer uga hadlay Shirkii Brussels iyo doorka Puntland, soo celinta hawadda Soomaaliya oo ku baaqay in la hakiyo ilaa dib-u-heshiisin la helo, doorashooyinka dhowaan dhacaya, heshiiska dowladda dhexe la gashay shirkadaha shidaalka iyo arrimo kale oo dhowr ah.
Dr. Faroole waxaa uu degniin u jeediyey shirkadaha shidaalka ee dhowaan heshiiska ay la gashay dowladda dhexe, kuwaas oo dhul laga siiyey deegaanada lagu mursan yahay ee Soomaaliland iyo Puntland u dhexeeya, waxaa uu dowladda dhexe ugu baaqay in laga hortago in arimaha shidaalka ay dhaliyaan caqabado hor leh.
Doorashooyinka ayaa madaxweyne Faroole sidoo kale ka hadlay waxaa uu degniin u jeediyey murashaxiinta, waxaa uu sheegay amaanka caasimada in ay dowladdu adkayn doonto wakhtiga doorashada, maamulka doorashada ayuu sheegay in ay dowladdu maamulayso, sidoo kale waxaa uu odoyaasha u jeediyey baaq in ay soo xulaan Xilibaano Aqoon, Karti iyo geesinimo u leh xilalka ay qabanayaan.
DHEGEYSO:- ?Khudbada madaxweyne Faroole oo dhamaystirsan.
Baahin: Arbaca, 16 Oct 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso